Ampianaro Dieny Mbola Kely ny Zanakareo | Fianarana
Efa Nohamasinina Ianareo
TANTARAM-PIAINANA ‘Mitondra ny Entako Isan’andro’ i Jehovah
Aza ‘Tezitra Amin’i Jehovah’ Mihitsy
Ampianaro Dieny Mbola Kely ny Zanakareo
Aoka Isika Hifampihevitra sy Hifampahery
Eritrereto hoe Olona Tokony Hanao Ahoana Ianao
FANTARO NY TANTARANTSIKA Faly Be Ilay Mpanjaka!
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kambôdzianina Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Ndebele Ndonga Norvezianina Nzema Népali Oromo Ouzbek Pangasinan Poloney Portogey Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Venda Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Ny Tilikambo Fiambenana—Fianarana | Aogositra 2013
HOY ny Baiboly: “Lova avy amin’i Jehovah ny zanaka maro, ary valisoa ny aloaky ny kibo.” (Sal. 127:3) Tsy mahagaga àry raha faly be ny ray aman-dreny rehefa tera-bao.
Mitondra andraikitra lehibe koa anefa izany. Mila omena sakafo mahasalama tsy tapaka ny ankizy, raha tiana hitombo tsara sy ho salama rehefa lehibe. Mila sakafo ara-panahy koa izy, mba hahatonga azy hifandray akaiky amin’i Jehovah. Tokony hampianarina ny toro lalan’Andriamanitra àry ny ankizy. (Ohab. 1:8) Rahoviana no tokony hatomboka izany, ary inona no tokony hampianarina azy?
MILA TOROMARIKA NY RAY AMAN-DRENY
Nisy lehilahy iray avy amin’ny fokon’i Dana, nipetraka tao Zora, tany Israely. Manoa no anarany, ary tsy niteraka ny vadiny. Nisy anjely nilaza tamin’ny vadiny anefa hoe hanan-janaka lahy izy ireo. (Mpits. 13:2, 3) Azo antoka fa faly be izy mivady! Tsy maintsy ho nanahy koa anefa izy ireo hoe ahoana no hitaizany an’ilay zaza. Nivavaka àry i Manoa hoe: “Miala tsiny re, Jehovah ô! Aoka re, azafady, mba hankatỳ aminay indray ilay lehilahin’Andriamanitra nirahinao iny e, ka hampianatra anay an’izay tokony hataonay amin’ilay zaza ho teraka.” (Mpits. 13:8) Azo antoka fa nampianarin’izy mivady ny lalàn’Andriamanitra i Samsona zanak’izy ireo rehefa teraka. Azo inoana koa hoe tsy very maina ny ezak’izy ireo. ‘Nentanin’ny fanahin’i Jehovah’ i Samsona tatỳ aoriana, ka nahavita asa lehibe maro rehefa lasa mpitsara teo amin’ny Israely.—Mpits. 13:25; 14:5, 6; 15:14, 15.
Nivavaka i Manoa mba hahazoany toromarika mikasika ny fomba itaizany ny zanany
Rahoviana no tokony hatomboka ny fampianarana ny ankizy? Azo atomboka izany dieny mbola tena kely izy. “Mbola zazakely”, ohatra, i Timoty dia efa nampianarin’i Eonika reniny sy Loisa renibeny “ny Soratra Masina.”—2 Timoty 1:5; 3:15.
Hendry ny ray aman-dreny kristianina raha mivavaka mba hahazoana tari-dalana, sy miomana mialoha mba hampianatra ny zanany dieny “mbola zazakely.” Hoy ny Ohabolana 21:5: “Ahazoan-tombony ny fandaminana mialoha ataon’ny mazoto.” Miomana tsara ny ray aman-dreny, alohan’ny hahaterahan’ny zanany. Mety hanao lisitry ny zavatra hilain’ilay zaza mihitsy aza izy ireo. Tena tokony hoeritreretiny mialoha koa anefa hoe ahoana no hanampiany ny zanany hahalala an’i Jehovah. Tokony hataon’izy ireo tanjona ny hampianatra an’ilay zaza, dieny mbola tena kely izy.
Hoy ny boky iray momba ny fitomboan’ny zaza: “Mitombo be ny sain’ny zaza mandritra ireo volana voalohandohany amin’ny fiainany. Mitombo avo 20 heny ny isan’ny fitohizan-tselam-pitatitra ao amin’ny atidohany, ka afaka mianatra zavatra be dia be izy.” Mandalo haingana izany fotoana izany, ka hendry ny ray aman-dreny raha manararaotra an’izany mba hampianarana ny zanany momba an’i Jehovah sy ny fitsipiny.
Nilaza toy izao momba ny zanany vavy ny renim-pianakaviana iray, mpisava lalana maharitra: ‘Nentiko nanompo niaraka tamiko izy, raha vao iray volana monja. Marina fa tsy nahazo na inona na inona izy, nefa mino aho fa nahasoa azy izany. Sahy nanolotra taratasy mivalona teny am-pitoriana izy, tamin’izy roa taona.’
Misy vokany tsara ny fampianarana ny ankizy dieny mbola kely. Tsapan’ny ray aman-dreny anefa fa tsy mora foana izany.
“HARARAOTY TSARA NY FOTOANA”
Mora miriorio saina sy mora leo ny ankizy, ka mety hanahirana ny mampianatra azy. Vetivety ihany izy no mifantoka amin-javatra iray, fa mieritreritra zavatra hafa indray avy eo. Tsy mahagaga izany satria liana amin’ny manodidina azy izy ary te hamantatra an’izany. Inona no azon’ny ray aman-dreny atao mba hanampiana ny zanany hifantoka amin’izay ampianariny?
Diniho izay nolazain’i Mosesy. Hoy ny Deoteronomia 6:6, 7: “Aoka ho ao am-ponao ireto teny andidiako anao anio ireto. Dia alenteho tsikelikely ao an-tsain’ny zanakao izany ary resaho, na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha eny an-dalana, na mandry, na mifoha.” Ilay teny hoe ‘mandentika tsikelikely’ dia midika hoe mamerimberina matetika ny zavatra ampianarina. Toy ny zana-kazo mila tondrahana matetika ny ankizikely. Ny olon-dehibe aza mila famerimberenana mba hahafahany hitadidy zavatra, ka mainka moa fa ny ankizy!
Mila manokana fotoana ho an-janany ny ray aman-dreny, raha te hampianatra azy ny fahamarinana. Be atao anefa izy ireo ka sarotra ny mahita fotoana. Nampirisika antsika ‘hanararaotra tsara ny fotoana’ ny apostoly Paoly, mba hahafahantsika hanao an’ireo zava-dehibe kokoa. (Efes. 5:15, 16) Ahoana no hanaovana an’izany? Diniho ny ataon’ny anti-panahy iray. Tsy mora aminy ny mahita fotoana hampianarana an-janany. Miasa mantsy izy, sady manana andraikitra eo anivon’ny fiangonana. Be atao koa ny vadiny satria mpisava lalana maharitra. Ahoana àry no ataon’izy mivady? Hoy ilay rahalahy: “Mamaky Ny Bokiko Misy Fitantarana avy ao Amin’ny Baiboly na ny Fandinihana ny Soratra Masina Isan’andro amin’ny zanakay izahay isa-maraina, alohan’ny handehanako hiasa. Mamaky teny ho azy koa izahay amin’ny hariva, alohan’ny hatoriany, ary entinay miaraka manompo aminay izy. Tsy tianay ho verivery fotsiny ireo taona voalohandohany eo amin’ny fiainany.”
‘TOY NY ZANA-TSIPÌKA NY ZANAKA’
Azo antoka fa tiantsika ho lasa olon-dehibe matotra ny zanatsika. Ny hahatonga azy ho tia an’Andriamanitra amin’ny fony anefa no tena antony ampianarantsika azy.—Mar. 12:28-30.
Hoy ny Salamo 127:4: “Toy ny zana-tsipìka eny an-tanan’ny lehilahy mahery ny zanaky ny fahatanorana.” Toy ny zana-tsipìka àry ny zanaka, ka tokony hokendrena tsara izay handefasana azy. Tsy azo samborina intsony ny zana-tsipìka iray rehefa nalefa. Azo lazaina hoe fohy koa ny fotoana ahafahan’ny ray aman-dreny mampianatra ny zanany. Tokony hohararaotiny tsara izany fotoana izany mba hampianarana azy ho tia sy hankatò ny lalàn’Andriamanitra.
Hoy ny apostoly Jaona, momba an’ireo olona nampiany ho lasa mpanompon’i Jehovah: “Tsy misy mahavelom-pisaorana ahy mihoatra noho izao, dia ny andrenesako fa mandeha foana ao amin’ny fahamarinana ny zanako.” (3 Jaona 4) Faly be toy izany koa ny ray aman-dreny kristianina, rehefa mahita ny zanany “mandeha foana ao amin’ny fahamarinana.”
NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Aogositra 2013